Oppah Muchinguri Monitored Mozambiquen Elections Kick Off – ZimEye
Oppah Muchinguri Monitored Mozambiquen Elections Kick Off
Paul Nyathi|Polling opened across Mozambique on Tuesday, with 13 million voters registered to cast ballots in presidential, parliamentary, and provincial elections seen as key to consolidating peace in the southern African nation.
The southern African nation of nearly 30 million people on the Indian Ocean was hit by Cyclone Idai which also hit eastern Zimbabwe and, weeks later, Cyclone Kenneth, raising fears about what climate change would bring to the country’s sprawling coastline in the decades to come.
A runoff similar to the one provided for under Zimbabwean laws will be held if no presidential candidate wins a majority of the vote.
Zimbabwe in its capacity as chair of Sadc’s Organ on Politics Defence and Security leads the regional body’s observer mission to oversee the elections.
Defence and War Veterans, Minister Oppah Muchinguri-Kashiri is the leader of the SEOM to Mozambique during the period 2nd to 22 October 2019 as mandated by President Emmerson Mnangagwa who is chairing the SADC organ.